Xog Xasaasi Ah Oo Ku Saabsan Dilkii Jamal Khashoggi Oo La Soo Bandhigay – somalilandtoday.com
Xog Xasaasi Ah Oo Ku Saabsan Dilkii Jamal Khashoggi Oo La Soo Bandhigay
(SLT-Ankara)-Wargeys laga leeyahay dalka Turkiga ayaa daabacay macluumaad cusub oo ku saabsan cod la duubay, kaasoo uu wargeysku sheegay inuu diiwaan galiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee uu waajahay wariyihii la dilay ee u dhashay dalka Sacuudiga, Jamaal Khaashuqji.
Wargeyskan lagu magacaabo Sabah, oo taabacsan xukuumadda Ankara ayaa sheegay in qoraalka uu shalay daabacay laga sameeyay codka lagu duubay gudaha, ka dibna ay gacanta ku dhigeen sirdoonka Turkiga.
Wargeyska Sabah wuxuu hore ciwaanno badan oo caalami ah uga sameeyay macluumaadka ku saabsan dilka wariyaha – waxaana ka mid ahaa warar muran abuuray – oo la xidhiidha dhimasada Jamaal Khaashuqji.
Toddobaadkan wuxuu daabacay laba warbixin oo lagu faahfaahinayo dhimashada Khaashuqji oo ay ka dambeeyeen koox uu ku tilmaamay “kuwa dilalka fuliya”.
Wuxuu markaas ka dib raggii dilayay u sheegay inaysan afkiisa xidhin maadaama uu qabo xanuunka neefta, laakiin isla markiiba uu miyir beelay.